SPM News: Somali 5.4.22
Published May 4, 2022 at 6:44 PM CDT
Guddoomiyaha South Dakota Kristi Noem ayaa qorsheynaya in uu si degdeg ah ugu yeero kalfadhi sharci-dejineed oo gaar ah haddii Maxkamadda Sare ee Maraykanku ay laasho Roe V. Wade, xukunkii 1973 ee sharciyeeyay ilmo iska soo rididda waddanka oo dhan.
Noem ayaa barteeda twitterka ku soo qortay habeenimadii Isniinta ka dib warbixin Politico ah oo soo jeedinaysa in maxkamada sare ee qaranku ay burin doonto xukunka.
South Dakota waa mid ka mid ah 13 gobol oo leh waxa loogu yeero sharciga kiciya kaas oo ilmo iska soo rididda ka dhigaya sharci darro isla markaaba haddii Maxkamadda Sare ay afgembiso Roe v. Wade. Waxa kaliya ee ka reeban sharciga gobolka, ee sharci-dejintu ansixiyay 2005, waa haddii nolosha hooyada ay khatar ku jirto.
Maamulaha Magaalada Sioux Bob Padmore ayaa sheegay in aysan "waaqici ahayn" in laga fikiro in magaaladu ay bedeli karto in ka badan 3,000 oo kuraas caag ah oo ku yaal Lewis & Clark Park ka hor ciyaarta sahaminta gurigooda ugu horreeya ee May 17.
Joornaalka Sioux City Journal ayaa ku waramaya in mulkiilaha Explorers John Roost uu sheegay in hadii aan dayactirka la samaynin aysan kooxdu ku ciyaari doonin garoonka kubbada cagta sanadkan. Hogaamiyayaasha magaalada ayaa Roost u sheegay inaysan haysan lacag ay ku bedelaan dhammaan kuraasta sanadkan, balse ay u sameyn doonaan wejiyo.
Magaaladu waxay leedahay garoonkii hore ee Sahamiyayaasha ilaa 1993. Kuraasta waa la bedelay mar kale.
Magaaladu waxay u qoondaysay ilaa $150,000 sanad xisaabeedka bilaabmaya 1-da Luulyo.
Maalmaha gu'ga qabow, dabaysha ayaa ka tagay goosashada likaha morel ee Iowa dib u dhac.
Taariikhdan, ugaarsadaha likaha ayaa caadi ahaan qaro weyn dhulka kaymaha ah ee ururinaya cuntooyinka macaan oo soo baxa wakhti yar oo keliya gu' kasta.
Iyadoo dhowr ugaarsato ah ay bilaabeen inay ka warbixiyaan guulo laga gaaray qaybo ka mid ah koonfurta Iowa iyo koonfur-bari Nebraska, saraakiisha DNR waxay sheegeen in roob wanaagsan oo ay raacaan maalmo diiran ay keeni karaan in ay boodaan xilliga.
Boqoshaada Morel waxay u baahan yihiin heerkulka ciidda inta u dhaxaysa 50 iyo 54 digrii si ay u koraan.